မေးစရာလေးရှိလို့ပါ - MYSTERY ZILLION
September 2011 edited September 2011 in Member ဆိုင်ရာ
ကျွန်တော်ကွန်ပျုတာမှာ font size ကနဲးနဲး​small them how to do it please explain to me ....help me
အကို ဘာတွေပြောနေတာလဲ မသိဘူး :P
နည်းနည်း ရှင်းရှင်း ပြောပါလား ခင်ဗျာ။ မြန်မာလိုဆိုရင် မြန်မာလိုပေါ့။ ဒါမှမဟုတ် ဘိလပ်လို ဆိုလည်း ဘိလပ်လိုပေါ့ဗျာ။
you want to change small or you want to change big.
you should goto the following address.
ကျွန်တော်ရဲ့ Vanilla ဆိုက်လေးကို facebook addon ထဲ့ချင်လို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို ​ဖြေကြားပေးပါလားဗျာ သိချင်လို့ပါ
You can read in Official VanillaForum.